Savita Bhabhi: Majaajilada ugu caansan uguna Muransan Hindiya | Safarka Absolut
Savita Bhabhi: Majaajilada ugu caansan uguna muranka badan India
maruuzen | | La cusboonaysiiyay 17/06/2021 23:22 | Hindiya
Waxaan jecelahay inaan akhriyo majaajillada waana nooc farshaxan oo runtii aan xuduud lahayn. Waxay noqon kartaa in majaajiladu ay la mid yihiin Mareykanka, Yurub ama Jabbaan, laakiin runtu waxay tahay, tusaale ahaan, waxaa sidoo kale jira majaajillo gudaha Hindiya iyo mid ka mid ah majaajillada ugu caansan Savita Bhabhi.
Taasi waa waxa loogu yeero Majaajillada ugu caansan uguna qosolka badan India maantana, Absolut Viajes, waxaan dooneynaa inaan la kulanno. Maadeeyaha Hindida? Runtii? Hagaag haa, markaa waa waqtigii laga tegi lahaa manga iyo majaajilladaha kale ee Aasiya iyo Reer Galbeedka in muddo ah si aad u barato qosol Waxaa laga sameeyey India.
1 Maadooyinka Hindiya
2 Savita Bhabhi, majaajillada luuqda
3 Dhacdooyinka Savita Bhabhi
Aan u gudubno qaybo, ayuu yiri Jack the Ripper. Marka, aan ku bilowno inaan ogaanno adduunyada majaajillada waxyar oo ka jirta dalkan ballaadhan ee baaxadda weyn. Majaajiliistayaasha Hindida waxay la baxaan magaca chitrakatha. ereyga waxaa ku jira buugaag majaajillo iyo sheeko-gacmeedyo matalaya dhaqanka dalka, sidaas darteedna, waxaa lagu daabacay dhowr luqadood oo halkan looga hadlo.
Aynu xusuusano in Hindiya ay leedahay diin aad u hodan ah iyo sheeko xariir, sidaa darteed dalku wuxuu leeyahay dhaqan soo jireen ah oo akhristayaal ah buugaag, buugaag sawiro iyo majaajilo laga soo bilaabo yaraantii. Hase yeeshe, warshadaha majaajillada waxay ka bilowdaan '60s, laakiin kaliya qoyska iyo carruurta dadweynaha. Laanta qaangaarka ee genus ayaa markii dambe halkan ku soo ifbaxday, laakiin ugu dambeyntii way ku guuleysatay.
Heer dhaqaale, Majaajilaystayaasha Hindida waxay si weyn u guuleysteen dhammaadkii 80-meeyadii iyo bilawgii tobanka sano ee soo socda, sannado aysan madbacaduhu siinin wax baaxad leh. Dabcan, tirooyinka daabacaadda iyo iibka ee lamid ah ayaa hoos udhacay tan iyo markaas, sida adduunka oo dhan, iyo marka loo eego qaybta carruurta ma awoodin inay la tartanto kanaallada telefishanka ama warshadaha ciyaarta fiidiyowga.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, sanad kasta waxaa jira dhacdooyin gaar ah oo nukliyeerka dunida ka dhiga, sida kuwa Comic Con Hindiya, Comics Fest India, Indie Comix Fest ama Carwada Buugaagta Adduunka ee New Delhi. Waana run sidoo kale in hal abuureyaal badan oo majaajillo Hindi ah ay bilaabeen inay u haajiraan Galbeedka iyagoo xoogaa u shaqeynaya Dark House, DC, Archies ama Image.
Savita Bhabhi, majaajillada luuqda
In yar oo aan ka ogaanay adduunka majaajillada Hindida, aan hadda u gudubno tan majaajilo caan ah oo lagu muransan yahay. Maxaa muran loogu jiraa? Waa in ay tahay a majaajilo qaawan iyo galmada Hindiya waa arrin aad u adag.
Savita waa magaca ah hogaanka dumarka, a guriga leh dabeecado gogol dhaaf ah sida ku xusan dhaqanka Hindida. Ereyga kale, bhabhi, waxaa loola jeedaa dumaashi oo waa eray xushmad leh oo loo isticmaalo waqooyiga dalka si loola jeedo dumarka guryaha leh.
Majaajillada ayaa soo muuqday markii ugu horreysay sanadkii 2008, bishii Maarso, isla markaana markiiba muran baa ka dhashay maxaa yeelay bulshada Hindiya aad bay u ilaalisaa. Inbadan waxay yiraahdeen majaajillada waxay mataleysaa garab bulshada xorta ah, laakiin waxaan horey u ognahay in garabkaasi yahay mid aad uyar.
Laakiin saw maaha sawir-gacmeedka sharci-darrada ah ee Hindiya? Haa, soosaarida filimada qaawan waa sharci daro, markaa bilowga websaydhka lagu soo daabacay majaajillada ayaa faaf reeb lagu sameeyay ay dawladu si waafaqsan sharciga hada jira. Laakiin isla markiiba waxaa jiray sheegashooyin xor ah ka dibna saxafiyiin badan ayaa ku soo biiray dhaleeceynta cabirka dowladda, oo ay ugu yeereen mid dhexdhexaad ah iyo mid aabbo. Sidaa darteed, biyuhu way kacsanaayeen oo majaajillada lama baabi'in.
Marka ugu horeysa ee abuurayaasha majaajilada iyo goobta kaas oo lagu soo daabacay ayaa lagu hayey aqoonsi, oo ku hoos jira magaca guud ee Boqortooyada Boqortooyada, laakiin sannad ka dib, 2009, Puneet Agarwak, Abuuraha goobta iyo Hindida labaad ee Hindida ah ee ku nool Boqortooyada Midowday, ayaa shaaca ka qaaday aqoonsigiisa inuu sii wado la dagaalanka mamnuucida. Laakiin qoysku waqti fiican ma helin oo toddobaadyo ka dib ayaa lagu dhawaaqay hoos ugu deg majaajilada.
Ma uusan sii dheeraan laakiin waa guul, ka dibna la qabsiyo gaar ah oo luqado kale ah ayaa bilaabay inay soo muuqdaan. Magac ahaan, 2011 ayaa jiray majaajilo, sanadka 2013 filin iyo sanadka 2020 a ciyaaro, dhammaantood waxaa dhiirrigeliyay dabeecadda galmada ee haweeneyda guriga ka shaqeysa ee Hindida ah.
Dhacdooyinka Savita Bhabhi
Qaaciddada waa mid fudud oo had iyo jeer lagu guuleysto markay tahay kor u qaadida heerkulka ragga: Savita waa gabadh da 'yar oo qurux badan, aftahanimo leh oo xaas leh. In yar oo aan ka ogaanno caadooyinka Hindida, waxaan ognahay inay guursatay maxaa yeelay timaheeda qeyb ahaan waxaa loo marshay casaan qoto dheer, waxayna sidoo kale xirtaa hilqad dahab ah oo u dhiganta Hindida giraanta arooska.
Savita sidoo kale caadiyan waxay gashaa sari dhaqameed iyo guntin cas inta u dhaxeysa sunnayaasha, the bindi. Ninku guriga wuu ka maqan yahay, si looga baxsado kalinimada, caajiska iyo qanacsanaanta galmada Savita waa mid saaxiibtinimo la leh qof walba oo mara. Iyo saaxiibtinimo waxaan dhahnaa waxay la galmootaa dhammaantood. Ma jiraan wax xaaraan ah ama dembi leh ama mamnuucaya. Xitaa waxaa jira xoogaa jinsi ah oo ina tusin kara Galbeedka ...
Qosolka waa run Sagaarka xiisaha galmada la mamnuucay waana sababtaas awgeed waxay dharbaaxo ku noqotay muxaafidka bulshada Hindiya. Intaa waxaa sii dheer, xaqiiqda ah in majaajillada loo turjumay sagaal ka mid ah luqadaha ugu caansan Hindiya ayaa gacan ka gaysatay guushiisa. Guul ka muuqatay 30 kun oo macaamiil ah in ay ogtahay in ay leedahay waqtigeedii fiicnaa.
Guusha Savita Bhabhi sidoo kale waxay dhalisay doodo xamaasad leh oo dhexmara khubarada cilmiga bulshada. Isku soo wada duuboo waxaa la sheegaa in xitaa maanta 70% dadka Hindida ah ay wali yihiin kuwa aad u dhaqan badan. Laakiin, marka laga qiimeeyo majaajillada, dhaqanku ma samaynayo wadaad iyo inaad xirato saree oo aad u muuqato mid dhaqameed micnaheedu maaha inaadan ku hoggaamin karin nolol galmo firfircoon oo xitaa xoogaa xorriyad u leh heerarkaaga dhaqanka.
Taasina waa tan Savita Bhabhi si fiican u muujisay, waxa ka dhaca gudaha iyo ma ku shub la gallerie. Dhamaanteen waan ognahay inay wax ka dhacaan gudaha, laakiin cidina kama hadasho ... ama ugu yaraan ma jirin wax hadal ah oo badan oo Hindiya ah illaa imaatinkan majaajillada ah.
Laakiin waxyaabo miyey iska beddeleen Hindiya? Maya, waxay umuuqataa in Hindida aysan wali diyaar u aheyn kacaan galmo. Sikastaba xaalku ha ahaadee, dooda la soo saaray marwalba waa mid wanaagsan waxayna u ogolaaneysaa jiilalka soo koraya inay ka wada hadlaan ugu yaraan noloshooda jinsi oo ka xor ah xatooyada
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Savita Bhabhi: Majaajilada ugu caansan uguna muranka badan India
The drachma, lacagta Giriigga kahor euro